Mr.Zigon Tharyar: 2008
ချစ်ပန်းကိုင် ဖော်ကြင်ဆွေ၊ ရှာလို့သာနေ။
တရွေ့မှာ ပေး ၊ မပန်တော့ တွေး။
အချစ်ကို သူကပြိုင်၊ လွမ်းစပ်မှာ ထိုင်။
နတ်ဘုရားကို တိုင်၊ ပန်မည့်သူ ဝေး၊
တစ်ယောက် လာ၊ မပန်ပါ ပြန်လို့သွားတယ်
ချစ်ပန်းရယ် ပန်းဆင်သူကို၊ လွမ်းတယ်တဲ့လေး။
ချစ်ပန်းရှင် တငေးငေးနဲ့၊ တွေးမျှော်လို့သာ။
Posted by ဇီးကုန်းသာယာ at 8:29 AM0comments
ပြည့်စုံမှူ မှတ်တမ်းတစ်ခု ကိုပြုစုရင်း….
Posted by ဇီးကုန်းသာယာ at 6:24 PM0comments
အလွမ်း ရဲ့ ဆန္ဒ
ဗီးနပ်စ် ရဲ့ဝိဥာဉ် လွန့်လူးပါလာသလို…
နွေဟာပူပင်မယ့် ငါ့ရင်ထဲ လမင်းသာသလို
ရက်တွေရဲ့ ပြေးလွားမှူမှာ ခိုစီးသွားရင်း
ငါမြင့်မားတဲ့ တောင်ထိပ်ပေါ်တတ်ရ သလိုပါပဲ….
လိပ်တတ်လာတဲ့ အချစ်တွေ မျိူချရတာ
စမော့တဲ့ အရက်ခွက် လို ခက်ခဲလွန်းပါတယ်….
(၇) ရက်ကာလရဲ့ အပြင်
လွမ်းရိပ်တွေ အပြင်အဆင် လှလို့
ငါသွားတဲ့ နေရာတိုင်း…. မရှိတာသိပေမယ့်
၁၆.၄.၂၀၀၇.. မှ ၂၃.၄.၂၀၀၇ ကိုခံစားရေးဖွဲ့ပါသည်….။
Posted by ဇီးကုန်းသာယာ at 2:35 PM0comments
ငြိမ့်ငြိမ့်လေး ကျွန်တော် ရွက်လွင့်တယ်...
တခါတလေ လေပြေ ကြည်စယ်
လှိူင်းအိအိ ကလေးတွေနဲ့ လဲ.......
ကျွန်တော်နှလုံးသား ရွက်လှေလေး ရွက်လွင့်တယ်....
ကျွန်တော် ရွက်လွင့်မယ်.................. ။ ။
Posted by ဇီးကုန်းသာယာ at 11:48 AM0comments
ကြယ်တွေစုံ လှပတဲ့ ညတစ်ညမှာ ဘုရားသခင်ရှေ့ ကျွန်တော်ရောက် ရှိသွားပါတယ်....။
နွေးထွေးဖော်ရွေစွာ ကျွန်တော်ကို ပြုံး ပြပါ၏်...။ ကျွန်တော်လဲ အူကြောင်ကြောင်နဲ့ မရဲတရဲ ပြန်ပြုံးပြ
ကျွန်တော်ကို ခေါင်းတစ်ချက်ညိမ့်ပြပြီး တဖြည်းဖြည်းမှူံဝါး ပျောက်ကွယ် သွားပါတယ်.......။
မကြာခင် ကျွန်တော်ရှေ့ မှာ တံခါးတစ်ပေါက် ပေါ်လာတာကို အူကြောင်ကြောင် မြင်လိုက်ရ၏်........။
ဘယ်လောက်ကြာကြာ ရပ်ကြည့်မသိ ........ သတိပေးစာတန်း အချက်ပေးလာသည်...။
"အထဲသို့ ၀င်လော့ အပြင်၌ ဘာရပ်လုပ်နေသနည်း"
ကျွန်တော် ပြာပြာသလဲလဲ သော့ လိုက်ရှာလိုက်တယ်...။ လက်ဝါးကပ်ပုံစံ သော့တစ်ချောင်း ချိတ်ထားတာတွေ့ ရ၏်........ လှမ်းရုံပဲရှိသေး သူ့ အလိုလို တံခါးပွင့်သွားပါတယ်...။
မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲ ပြေးဝင်လိုက်ပါတယ်......။ ရုတ်တရက် အမှောင်ထုစိုးမိုး သွားသောကြောင့် ကျွန်တော် ကြောက်လန့်တကြား နောက်ပြန်လှည့်မိပါတယ်... သို့သော် တံခါးပိတ်သွား၏..................။ထိုစဉ် ကျွန်တော်မျက်စိရှေ့တွင် သတိပေး စာတန်းကြီးပေါ်လာ၏........................။
"အမှောင်အတွင်းသို့ ရဲရဲလျှောက်ပါ ၊ သင်နောက်တွင် ဘုရားသခင်ရှိ၏"
မယုံမှာစိုး၍လားမသိ ကျွန်တော်သွားလေရာ သူလိုက်နေကြောင်း သိစေရန် ကျွန်တော့်ကို ရုပ်ရှင်ပြသကဲ့သို့
ခြေရာနှစ်စုံပြထား၏...။ ကျွန်တော်သွားတဲ့ ခြေရာနောက်က သူ့ခြေရာပေါ့..။ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နဲ့ ကျွန်တော်တို့ အမှောင်ထဲ လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် လတော်တော်များများ တစ်နှစ်မပြည့်တပြည့် ကြာတဲ့အခါ ကျွန်တော်နေရထိုင်ရ တော်တော်လေးခတ်ခဲလာပါတယ်..။ ကျပ်တည်းမှူ အသက်ရူကြပ်မှူတွေပါ ဖြစ်ပေါ်လာပါ
တယ်...။ ခြေရာတစ်စုံတည်း တွေ့ရတော့သဖြင့် ကြောက်လန့်တကြား ကျွန်တော်ထအော်မိပါတယ်...။ ထိုအခါ
"မစိုးရိမ်ပါနှင့် ခြေရာသည် သင့်ခြေရာမဟုတ် ၊ သင့်အားပွေ့ ချီထားသဖြင့် ငါခြေရာသာမြင်ရ၏"
မကြာခင် ကျွန်တော် တစောင်းအနေအထားဖြင့် အောက်သို့ ငုံ့ ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်..။ ရုတ်တရက် ရေ ကျသံနှင့်အတူ အလင်းရောင် သဲ့သဲ့မြင်လိုက်၏...။ သွားစရာလမ်းမရှိတော့ ... ထိုလမ်းသာ အသက်ရူကျပ်တည်းမှူ မှ ကာကွယ်နိုင်ပေမည်....။ ထိုစဉ်စာတန်းပေါ်လာပြန်၏.............................။
"ရဲသော်မသေ ၊ သေသော်ငရဲမလား"
နွံတောအတွင်း ပစ်ချခံရသကဲ့သို့ ခံစား မှူနှင့်အတူ ကျွန်တော် အလင်းရောင်ရှိ ရာသို့ မျက်စိပိတ် တအားထိုးထွက်လိုက်ပါတယ်...။ မကြာခင် ရုတ်တရက်ပွေ့ ချီဆွဲ ခေါ်မှူ နှင့်အတူ ကျွန်တော် လွတ်လပ်စွာ အသက်ရူလိုက်ပါတယ်...။မျက်စိအဖွင့် အလင်း၏ စူးရှမှူကြောင့် ကျွန်တော် ကြောက်လန့်တကြား ထအော်လိုက်ပါတယ်...................။
Posted by ဇီးကုန်းသာယာ at 3:37 AM0comments
အမြဲတမ်း ကျွန်တော်ရဲ့ အိမ်မက်ရေကူးကန်ထဲ
အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော်ရဲ့ အသက် ၁၆ နှစ်
အတိတ်ဟာ အီလေးဆွဲ ၊ အနာဂတ်ဟာလေးလံသလို
ပစ္စုပ္ပန်မှာလဲ ဘုရားသခင်ရက်စက်လို့ ......
ကျွန်တော့် နံရိုးခုထိ မတောင်းသေးဘူး...........။
16 .7.2008 . ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
မှတ်ချက်။ ။ ညီမလေးတစ်ယောက် လုပ်ပေးလို့ ရေးဖြစ်တာပါ...။ လောလောဆယ် ဘာရေးရမှန်းမသိလို့ ရေးချင်တာပဲရေးလိုက်ပါတယ်.....။ :)
Posted by ဇီးကုန်းသာယာ at 5:42 PM0comments